Jiro 50.000 XNUMX manova ny tany efitra maina ho lasa nofinofy | Famoronana an-tserasera
Izahay dia liana amin'ny tolo-kevitra ara-javakanto misy loko sy jiro ary endrika tsy misy maharikoriko na inona na inona te-haneho hevitra, fihetsem-po na eritreritra. Matetika ny karazana amin'izy ireo dia mandalo eto ary mitondra antsika amin'ny loharanom-pahalalana hafahafa indrindra toa ny ny sary hosodoko an'ny mpilalao James Franco ny ahoana ny hallucinogenika tany efitra nivadika ho angano tsy ampoizina.
Satria io no tratran'i Bruce Munro amin'ny tetik'asa kanto misy azy mampiasa jiro 50.000 XNUMX hanova panorama iray manontolo hisokatra eo alohanay. Ity tany karankaina amin'ny alina mangatsiaka ity dia mianjera mba hanangana ity sangan'asa kanto ity izay amin'ny ankapobeny dia afaka manonofy antsika tanteraka amin'ny nofinofin'ireo izay tsy te-handositra amin'ny alàlan'ny fifohazana.
Ary i Munro dia tsy manova ny tany efitra fotsiny, fa mandeha mankeny an-dohasaha izy ary any an-tanety dia mitondra ny jirony mahagaga izay milaza tantara majika izay sary an-tsaina no fitaovana tsara indrindra hanidinana ny tampon-tranony noforonina miaraka amina originality sy asa lehibe.
Bruce Munro dia mpanakanto anglisy eken'ny mpitsikera iraisam-pirenena ary izay fantatra amin'ny fametrahana jiro midadasika. Ho an'ny tetikasany farany, izay ao anatin'ny andian-dahatsoratra antsoina hoe "Campo de luz" na "Field of Light", nisafidy an'i Aostralia ho mpanefy lamba ilay mpanakanto ho an'ny projet fahazavana manaraka azy. Volam-borona 50.000 XNUMX nasiana satroka fitaratra manarona faritra mitovy amin'ny kianja filalaovam-baolina efatra.
Ny sanganasan'ity mpanakanto ity dia aingam-panahy avy amin'ny fahalianany amin'ny traikefa izay olombelona mizara, ary ny hevitra dia avy amin'ny diany nankany amin'ny Desert Mena tao Uluru tamin'ny taona 1992. Nandritra ny diany dia nahatsapa ho manintona sy fifandraisana manokana amin'ny tontolon'ny tany efitra izy, ka ny "Field of Light" dia fomba iray ahatsiarovana ireo angovo azo.
Ianao dia manana ny facebook-nao hanohy ny asany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Jiro 50.000 XNUMX hanova ny tany efitra ho tantara angano tsy azo antoka